How and why to change the frequency of Wi-Fi ﻿
တစ်ခါတစ်ရံတွင် များစွာသောအကြောင်းပြချက်များကြောင့် သင်အသုံးပြုနေသည့် Wi-Fi connection ၏ ကြိမ်နှုန်းများကို သင့်အနေနဲ့ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
ခေတ်ပေါ် Wi-Fi ဖမ်းယူစက်များသည် အများအားဖြင့် မတူညီသောကြိမ်နှုန်း ၂ ခုတွင်အလုပ်လုပ်ကြပါသည်။ Download (အချက်အလက်များ Download ပြုလုပ်ခြင်း) နှင့် upload (အချက်အလက် များ Upload ပြုလုပ်ခြင်း) တို့ပြုလုပ်ရန်အတွက် မြန်ဆန်သော Data ကူးပြောင်းစီးဆင်းမှုကိုရရှိစေ ရန် အနည်းဆုံး5GHz မြန်နှုန်းရှိသည့် Band ကို လိုအပ်ပါမည်။ ဒီချိတ်ဆက်မှုကွန်ယက်သည် အထူးသဖြင့် အကွာအဝေးတိုတောင်းသောနေရာများသို့ ဒေတာကူးပြောင်းမှုများပြုလုပ်ရာတွင် ချောမွေ့မှုရှိစေပြီး ကောင်းမွန်သောအခြေအနေများကို ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
မည်သည့် Band ကို အသုံးပြုရမလဲ?
5 GHz မြန်နှုန်းတွင်အသုံးပြုသည့်အခါတွင် အထူးသဖြင့် Signal ၏လမ်းကြောင်းတွင်အတားအဆီး များရှိနေသည့်အခါများတွင် မလိုလားအပ်သောအနှောက်အယှက်ဖြစ်ခြင်းများ မကြာခဏဆိုသလို ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်အနေနှင့် 2.4 GHz Band များကိုအသုံးပြုခြင်းက များသော အားဖြင့် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းဖြစ်ပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အဆိုပါအရာ သည်5GHz မြန်နှုန်းများနှင့်နှိုင်းစာလျှင်ပိုမို၍နှေးကွေးသော်လည်း ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအတားအဆီး များကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ Signal များဖြတ်သန်းသွားနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ရှိသောမူကွဲတစ်ခုသည်လည်း Signal များကူးပြောင်းမှုပြုလုပ်ခြင်း၏ အခြားသောမူကွဲတစ်ခုဖြစ်ပါ သည်။
များစွာသော ယနေ့ခေတ်ပေါ် Wi-Fi ဖမ်းယူစက်များသည် အထက်ပေါ်ပြပါကြိမ်နှုန်းနှစ်ခုအပေါ်တွင် တစ်ပြိုင်နက်လွယ်ကူစွာထုတ်လွှင့်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်အနေဖြင့်လိုလားသော ကြိမ် နှုန်းကို လက်ခံမည့်စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်ရွေးချယ်၍ရနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ရွေးချယ်ခြင်းအား ကိုယ်တိုင် လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် (သို့) စက်ပစ္စည်းမှ ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ချိတ်ဆက်မှုကွန်ယက်အား အလို အလျှောက်ရွေးချယ်ပေးခြင်းတို့ဖြင့် အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့် သင့်ကိုယ်ပိုင်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်တစ်ခုကို router အားအသုံးပြု၍တည်ဆောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးပါက လက်ခံရရှိသည့် Signal များကောင်းနိုင်သမျှကောင်းစေရန်နှင့် မည့်သည့်အရာနှင့်မျှ အနှောင့်အယှက် ဖြစ်နေခြင်းမရှိစေရန်အတွက် ထိုအရာအားနေရာချပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်ဟာ မတူကွဲပြားသော ကြိမ်နှုန်းများတွင် ပိုမိုများပြားသော စက်ပစ္စည်းများကို ချိတ်ဆက်မှုများပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Router များတွင် ကြိမ်နှုန်းများအား မည်သို့ပြောင်းလဲနိုင်ပါသလဲ?
သင့်အိမ်ရှိ ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်တွင်မကြာခဏ ပြတ်တောက်မှုများ သို့မဟုတ် သင့်ရဲ့ အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှုများနှေးကွေးခြင်းတို့ကို မကြာခဏတွေ့ကြုံနေရပါက ဖြေရှင်းနည်းမှာ သင့် Wi-Fi ကွန်ယက်၏ ထုတ်လွှင့်သည့်ကြိမ်နှုန်းနှင့် လိုင်းများကို ပြောင်းလဲရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ ထုတ်လုပ် သူများအပေါ်မူတည်ပြီး ညွှန်ကြားချက်များကွာခြားမှုရှိနိုင်သော်လည်း အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အများအားဖြင့် တူညီမှုရှိနိုင်ပါသည်။
Modem administration သို့ browser မှတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်ပါ။ 192.168.1.1 အား browser ပေါ်ရှိ website လိပ်စာရှာဖွေသောနေရာတွင်ထည့်သွင်းပါ (သို့) ထုတ်လုပ်သူ၏ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း ပါဝင်သည့် IP address အားထည့်သွင်းပါ။
ထို့နောက် သင့် modem အား ပထမဦးဆုံးအကြိမ် စတင်တပ်ဆင်သည့်အချိန်ကထည့်သွင်းထားသော password ကို ထည့်သွင်းပါ။ သင် password ကိုမပြောင်းခဲ့ပါက modem ၏အောက်ခြေတွင်ရှိသော တံဆိပ်ပေါ်တွင်တွေ့ရှိနိုင်သည့် Setting Password အပိုင်းမှ PIN နံပါတ်အားထည့်သွင်းပေးပါ။
Advanced Setting များကို ရွေးချယ်ပါ။
Wireless Setting များသို့သွားကာ Wireless Signal အားရွေးချယ်ပေးပါ။
2.4 GHz ကြိုးမဲ့ကြိမ်နှုန်း အတွက် သင်သည် Channel လိုင်းတွင် ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Manual အားရွေးချယ်ပြီးနောက် ကျလာသောဇယားမှ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသော ချန်နယ်တစ်ခုကိုရွေးချယ် လိုက်ပါ၊
သင်ဟာ5GHz ကြိမ်နှုန်းဖြင့်အသုံးပြုနေပါက ကြိမ်နှုန်းကွန်ယက်အား တစ်ခုနှိမ့်ကာပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
သင့်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုများကို မှတ်သားရန်အတွက် Apply Changes ခလုတ်ကိုနှိပ်ပေးပါ။
အခြားသော router များသည်လည်း နှောက်ယှက်မှုများပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကြိုးမဲ့ router များကို အသုံးပြုလာမှုများ ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အနီးဝန်းကျင် တွင်ရှိသော ကွန်ယက်များသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အနှောင့်အယှက်များပြုနိုင်ပါသည်။ Wi-Fi ကွန်ယက် များစွာရှိသောနေရာများတွင် နှောင့်ယှက်မှုများနည်းပါးသောကြိမ်နှုန်းနှင့်လစ်ဟာနေသော လိုင်းများကိုရှာဖွေပြီး သို့မဟုတ် အချို့သော စက်ပစ္စည်းများ (desktop PC အစရှိသည်တို့) အတွက် ကြိုးဖြင့်ချိတ်ဆက်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် နှောင့်ယှက်မှုများမဖြစ်အောင် လုပ် ဆောင်ပါ။ နောက်ပြီး ခေတ်ပေါ် ၂မျိုးသုံး router များသည် ထိုကဲ့သို့သော ပြဿနာများကို အလို အလျှောက်ဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်ကိုသိထားစေချင်ပါသည်။ ထိုအရာသည် သင့်လျှော်သည့်လိုင်းကို အလိုအလျှောက်ရှာဖွေပေးနိုင်ပါသည်။ အကောင်းဆုံးလိုင်းဆိုသည်မှာ အခြားသော Wi-Fi ကွန်ယက် များအနည်းပါးဆုံးလိုင်းဖြစ်ပါသည်။